‘धराने जनता परिवर्तनको पक्षमा छन्, कांग्रेसलाई एकपटक हेरौं भनिरहेका छन्’ - Sainokhabar
होमपेज / राजनीति / ‘धराने जनता परिवर्तनको पक्षमा छन्, कांग्रेसलाई एकपटक हेरौं भनिरहेका छन्’
‘धराने जनता परिवर्तनको पक्षमा छन्, कांग्रेसलाई एकपटक हेरौं भनिरहेका छन्’
पूर्वको सुन्दर नगरी धरान उपमहानगरपालिकामा यतिबेला स्थानीय तहको उपनिर्वाचन लागिरहेको छ । दलहरू मत माग्न व्यस्त छन् । काङ्ग्रेस, नेकपाबीच धरानमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने निश्चितजस्तै छ । नेकपा शक्तिशाली भएपनि तिनैको मत तान्दै भएपनि यसपटकको चुनावमा जित हात पार्ने दाउमा काङ्ग्रेस रहेको काङ्ग्रेसबाट सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनेका तिलक राई बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा धरान उपमहानगरपालिकाको चुनावी सरगर्मीका विषयमा कांगे्रसका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार राईसँग गरिएको कुराकानीः
अहिले धरानका विभिन्न वडाका स्थानीय, विभिन्न नेता, कार्यकर्ता साथै प्रवुद्ध वर्गसँग अहिले भेटघाट तीब्र छ । सबै वडामा पुग्ने तरखरमा छौं ।
धरानमा मेयर पदका लागि आफूलाई कस्तो मेयरका रूपमा उभ्याउनु भएको छ ?
म यही धरानमा जर्मेर हुर्केर मेरो उमेरअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । म अहिले र पहिला पनि आफ्नो क्षमताअनुसार धरानकै लागि भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छु । म निरन्तररुपमा निःस्वार्थ भावनाले धरानका समग्र विकासका लागि, समृद्धिको लागि लागिरहेको छु । त्यसैले पनि धरानको समृद्धि र विकासका लागि म मेयरका लागि पुग्न जरुरी देखेको छु ।
कुन कुन कुरालाई विशेषतः समेट्दै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
यहाँको भूगोल, यहाँको इतिहास हेरेर म अघि बढ्दै आएको छु । नेकपाले अहिलेसम्म धरानको लागि केही नगरेको भन्दै जनगुनासो बढ्दो छ । जुन सेवा–सुविधा जनताले पाउनुपर्ने हो त्यो नपाइरहँदा जनगुनासो बढ्नु स्वभाविक हो । धरान उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी संयन्त्र र प्रशासन चुस्तदुरूस्त बनाउनु जरुरी छ । नीति, निर्माण र निर्देशनसहित संयन्त्र बनाउने मेरो ध्येय छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाले दिने सेवा–सुविधामा कमी हुन दिने छैन । यस्तै, विकासको एजेन्डामा बसपार्क, खानेपानी, एयरपोर्ट, कर आदिका बारेमा पनि हामीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्दछ ।
त्यस्तै, धरान कस्तो सहर हो, धरान कतातिर अगाडि बढिरहेको छ, अहिलेसम्म थाहा छैन, यसको परिकल्पना गर्नु जरुरी छ । शैक्षिक, व्यापारिक, पर्यटकीय, बहुसांस्कृतिक, स्वास्थ्य, रेसिडेन्टल वा अन्य कुनै ? दीर्घकालीन योजना कतातिर जाने हो मापदण्ड तयार गरेर धरान कस्तो सहर हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नेछु । मैले निर्वाचन जितेपछि अहिलेकै सल्लाहकार समिति रहेको सबै तह, वर्ग, समुदायको सल्लाहकार समिति बनाएर धरानको विकासको मोडल तयार गर्नेछु । म नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट प्रतिनिधित्व गरेको भएपनि समग्र नगरबासीको प्रतिनिधित्व गरेर काम गर्ने इच्छा छ । अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाएर अघि बढेको हुँदा मलाई काम गर्ने अवसर दिनुहोस् ।
खानेपानीको सवालको कुरामा तपाईको धारणा के छ ?
आयोजनाको विरोध गरेका हौं, आइयुडिपीको विरोध गरेका छैनौं । खानेपानीका लागि हामीले कहिल्यै राजनीति गरेका छैनौं । त्यतिबेला विरोध ग¥यौं जतिबेला डिटेलअनुसारको काम भएन । उत्पादन भएन, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको नगरबासीमा आशङ्का भयो, त्यतिबेला विरोध गरेका हौं । खानेपानी आयोजना नगरबासीको हो, बेवास्तापन, कार्यक्रम, कार्यविधि र भ्रष्टाचारको आशङ्का, खानेपानी आयोजना फेल भन्ने जस्ता गलत कामको हामीले विरोध गरेका हौं । हाम्रो भनाइ छ, डिटेल प्रोजेक्टअनुसार पानी उत्पादन हुनुप¥यो, पानी खस्नुप¥यो र वितरण हुनुप¥यो । यी कुरा नभएपछि विरोध गरेका हौं ।
बीपी प्रतिष्ठानबाट सन्तोषजनक स्वास्थ्यसेवा पाइरहेका छैनन् भन्ने गुनासो छ नि ?
धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख सिनेट सदस्य भएकोले समग्र नगरको प्रतिनिधित्व गरेको अहिलेसम्म पाएनौं । त्यो प्रतिनिधित्व मेरो हुनेछ । प्रतिष्ठान धरानको आर्थिक मेरुदण्ड र स्वास्थ्यको हिसाबले महत्वपूर्ण स्थान हो । प्रतिष्ठानमा समग्र धरानबासीको स्वास्थ्य बिमा गराउन मेरो ठूलो भूमिका हुनेछ ।
करका बारेमा तपाईहरूको धारणा त फरक पायौं नि ।
बजेट त चाहिन्छ नै तर अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक कर भयो भन्ने हाम्रो विरोध हो ।
स्थानीय चुनावको परिणाम हेर्दा त तपाईको मत धेरै कम छ नि ?
मतको अङ्क गणितलाई कसैले पेवा ठान्नु हुँदैन । अर्को कुरा धराने जनता यसपटक परिवर्तनको पक्षमा छ । एकपटक कांग्रेसलाई पनि हेरौं न त भन्ने जमात बढी छ । धरानका मतदाता कसैको पेवा होइन । जनताले सधैं एउटै पार्टीलाई मत दिन्छन् भन्ने छैन । जनताले परिवर्तनको पक्षमा छन् । जनतामा निराशा छ । त्यो निराशामा आशा पनि छ, परिवर्तन गर्दा केही पो हुन्छ भन्ने छ । त्यसैले मत र मतदाता कसैको पेवा हुँदै होइन । जनतामा अहिले उत्साह छ, त्यो उत्साहमा १५–२० प्रतिशत मत यता ल्याउन सकिन्छ । अर्कोकुरा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र अन्य दलसँग मिलेर माओवादीले पाएको मत काङ्ग्रेसमा आउँछ । प्रत्येक वडाबाट एक सय दुई सय मत मात्रै ल्यायौं भने म अहिले २०७४ मा भन्दा बलियो छु । म २०७४ भन्दा २०७६ परिपक्व छु । जनताले हेरिरहेका छन्, म कहीँ तलमाथि भएको छैन । भ्रष्टाचारमा लागेको छैन, शुन्य सहनशीलता अपनाएको छु, जनताले यस्तै व्यक्ति खोजिरहेका छन् । त्यसैले मनोवैज्ञानिक, काम गर्ने आधारका हिसाबले साथै अङ्क गणित पनि प्लसमा छु ।
प्रतिपक्षीलाई म नराम्रो भन्न चाहन्नँ । मैले उहाँहरूकै मतले मैले यसपटकको चुनाव जित्ने हो, काङ्ग्रेसको मतले मात्रै कहाँ जित्छु म । तत्कालीन एमाले, माओवादी, न्युटल मतले नै जित्ने हो । ती पार्टीका शुभेच्छुक मतदातासँग भन्नेछु–तपाईहरूको नेतृत्वले काम गर्न सकेन, यो पटक मलाई दिनुहोस् । हिजो थुप्रै मुद्दा उठाउँदा माओवादी, एमालेका शुभेच्छुकले पनि ठीक गर्नुभयो भनिरहेका छन् ।
धरानेले व्यक्तित्वको प्रभाव पनि हेर्छन् नि ?
जो आएपनि हार्दिकतापूर्वक निर्वाचन लड्छु । बिना घोचपेच चुनावमा जान्छु । अहिले पनि म कसैलाई गाली नगरीकन भोट मागिरहेको छु ।- hamrokoshiawaz.com